NMDC – NMDC
Author - NMDC
Tuesday June 22nd, 2021 By NMDC Uncategorized Comments Off
အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်၏ ၆ ထပ် (ပင်မဆောင်)အသစ် တည်ဆောက်ရေးအတွက် ပန္နက်တင်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကို (၂၃-၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့ နံနက် (၉:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်မှ ကျောင်းအုပ်ကြီး ဒေါက်တာတင်တင်ထွေးနှင့် တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ဝင် ဌာနမှူးများ၊ A1 ကုမ္ပဏီမှ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
Sunday January 24th, 2021 By NMDC Uncategorized Comments Off
The STEPup Project, “Multiplier Event 1” titled “Strengthening Innovative Social Entrepreneurship Practices for Disruptive Business Settings in Thailand and Myanmar”, has been successfully accomplished on the 14th and 15th of January 2021″.
Friday January 22nd, 2021 By NMDC Uncategorized Comments Off
အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်၏ ၆ ထပ် (ပင်မဆောင်)အသစ် တည်ဆောက်ရေးအတွက် A 1 ကုမ္ပဏီနှင့်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းအခမ်းအနားကို (၂၀-၁-၂၀၂၁)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်မှ ကျောင်းအုပ်ကြီး ဒေါက်တာတင်တင်ထွေးနှင့် ဌာနမှူးများ၊ A1 ကုမ္ပဏီမှ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
Friday November 9th, 2018 By NMDC Uncategorized Comments Off
Monday October 1st, 2018 By NMDC Uncategorized Comments Off
အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပထမနှစ် BBM, BA(EPP), BTHM, BA(Journalism) ဝင်ခွင့်များ စတင်လက်ခံခြင်းအစီအစဉ်
အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီဂရီကောလိပ်၏ ပထမနှစ် ဝင်ခွင့်ပုံစံများကို (၁-၁၀-၂၀၁၈) မှ (၁၉-၁၀-၂၀၁၈) ထိ နံနက်(၉:၀၀)နာရီမှ ညနေ(၄:၀၀)နာရီအထိ လက်ခံဆောင်ရွက် ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ (စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ရုံးပိတ်ရက်များမပါ) လျှောက်လွှာနှင့်အတူ- ၁။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် ရရှိသော ရမှတ်စာရင်း(မူရင်း) ၂။ လျှောက်ထားသူနှင့်မိဘနှစ်ဦး၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား(မိတ္တူ) ၃။ လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ(၂)ပုံ တို့ကို ပူးတွဲလျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။
Friday September 28th, 2018 By NMDC Uncategorized Comments Off
Tuesday August 28th, 2018 By NMDC Uncategorized Comments Off
NMDC မှာအောင်မြင်စွာကျင်းပခဲ့တဲ့Open Campus: Your College, Your Future ပညာရေးဆိုင်ရာ အခမ်းအနား
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အောင်မြင်ပြီးတဲ့ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာကောလိပ် NMDC မှာ သြဂုတ်လ ၉ရက်နေ့က Open Campus 2018: Your College, Your Future ဆိုတဲ့ ပညာရေးဆိုင်ရာပွဲလေးကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပွဲလေးကို NMDC မှာသင်ကြားနေတဲ့ဘာသာရပ်တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး စိတ်ဝင်စားသူပေါင်း ၇၀၀ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဆယ်တန်းအောင်မြင်ပြီးသူများအနာဂတ်ပညာရေးလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ရာမှာ မိမိနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ဘာသာရပ်တွေ၊ မိမိအမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဘာသာရပ်တွေကို မှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ် နိုင်ဖို့အတွက်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် NMDC ကျောင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး “ဘယ်လိုကျောင်းမျိုးလဲ။ ဘယ်လိုဘာသာရပ်တွေကို သင်ကြားနေတာလဲ။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေဘယ်လိုရှိလဲ” ဆိုတာကို သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်များမှလက်ရှိတက်ရောက်နေဆဲကျောင်းသား/သူများသာမက၊ ဘွဲ့ရကျောင်းသားဟောင်းများကပြည့်ပြည့်စုံစုံဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ NMDC ရဲ့ [...]
Thursday August 16th, 2018 By NMDC Uncategorized Comments Off
ယနေ့ခေတ်လူငယ်များအတွက် မြန်မာ နှင့် စင်္ကာပူတို့၏ ပညာရေး နှင့် အလုပ်အကိုင် ဆွေးနွေးပွဲ ? HNC/HND(UK) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံပညာသင်နှစ် (10) နှစ်၊ (၉)တန်း ၊ (၁၀) တန်း သင်ယူပြီး သူများ အတွက် အချိန်တိုအတွင်း UK, Australia နိုင်ငံ၏ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း တက္ကသိုလ် တို့မှ ဘွဲ့ဒီဂရီ ကို ရယူ နိုင်မည့် (MSI) ၏ စကာၤပူ နိုင်ငံပညာရေးနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ၊ ဝင်ငွေ လစာနှုန်းထားများ ဆွေးနွေးပွဲ [...]
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် BBM, BA(EPP), BTHM နှင့် BA (Tourism) ပထမနှစ် သင်တန်းဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာ ခေါ်ယူမည့်အစီအစဉ် လျှောက်လွှာထုတ်ပေး။/လက်ခံမည့်ရက် – ၁၊၁၀၊၂၀၁၈ (တနင်္လာနေ့) မှ ၁၉၊၁၀၊၂၀၁၈ (သောကြာနေ့) အထိ ဝင်ခွင့်ရရှိသူများကြေငြာမည့်ရက် – ၁၅၊၁၁၊၂၀၁၈ (ကြာသပတေးနေ့) လျှောက်လွှာနှင့် အတူ ၁။ တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲတွင် ရရှိသော အမှတ်စာရင်း(မူရင်း) ၂၊ လျှောက်ထားသူနှင့် မိဘနှစ်ဦးစလုံး၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မိတ္တူ) ၃။ လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ (၂) ပုံ လျှောက်လွှာဒေါင်းလုတ်ရရယူရန်
Monday August 13th, 2018 By NMDC Uncategorized Comments Off
ကျောင်းကြီးပြီးတော့မယ်ဆိုေတာ့ နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့စဉ်းစားနေကြပြီဟုတ်? NMDC မှာ HEINEKEN Myanmar က ကျင်းပတဲ့ Campus Talk ကို လာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ နေရာ- NMDC NCRC Hall နေ့ရက်- သြဂုတ်လ (၁) ရက် အချိန်- နေ့လည် (၁-၃) နာရီအထိ HEINEKEN Myanmar ဝန်ထမ်းတွေဆီမှ Asia Pacific Graduate Programme (APGP) အကြောင်းကို ပိုမိုသိရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Programme လေးကို စိတ်ဝင်စားတယ် ဆိုရင်တော့www.heineken-apgp.com/Myanmar မှာ register လုပ်ထားလိုက်ပါ။
Tuesday July 31st, 2018 By NMDC Uncategorized Comments Off
အမျိုးသားစီမံခန့်ခွဲမှုပညာ ဒီဂရီကောလိပ် NMDC ရဲ့ နှစ်စဉ်ကျင်းပနေကျ ပညာရေးဆိုင်ရာ ပွဲတစ် ခုဖြစ်တဲ့ Open Campus 2018:Your college , Your Future ဆိုတဲ့ Edu Fair လေးကို သြဂုတ်လ (၉) ရက်နေ့ မှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုနှစ် ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင်နှစ်မှာ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်ြမင်ပြီးတဲ့ မောင်လေး၊ညီမလေးများအားလုံး လာရောက်လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီပွဲလေးမှာဆိုရင် ဆယ်တန်းအောင်မြင်ပြီးတဲ့ မောင်လေး ညီမလေးတို့အတွက် အနာဂတ်ပညာရေးလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ရာမှာ မိမိနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ဘာသာရပ်တွေ မိမိတကယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ ဘာသာရပ်တွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် ရွေးချယ်နိုင့်ရန်အတွက် [...]
Thursday March 22nd, 2018 By NMDC Uncategorized Comments Off